Chrome OS 81 yakauya nekuvandudzwa kwetablet mode | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi mumwe mushure vhezheni yapfuura, Google yakaburitsa hombe nyowani yekuvandudza kune yayo desktop desktop system. Ndezve Chrome OS 81 y iri pakati pedu, zvakanaka, kwenguva yakati ikozvino, saka zvine chokwadi kuti inofanirwa kunge yatosvika kumadhizaini anoenderana, ndokuti, maChbookbook. Iyo isiri-so-nyowani vhezheni yakaunza nhau dzinonakidza, pakati padzo kuvandudzwa kwetafura modhi kumira.
Sezvakataurwa naAlexander Kuscher, director weanoshanda system software, Chrome OS 81 ikozvino nyore kufamba mufafura mode Chromebook nekutenda kuunzwa kwemasaini nyowani, kuvhurwa kweKurumidza Shelf uye kumwe kugadziridza kune webhu bhurawuza iyo yakagadzirirwa piritsi modhi. Pazasi iwe une runyorwa rweakanyanya kunaka nhau dzakauya pamwe neshanduro iyi.
Zvakakwirisa zve Chrome OS 81
Matsva matsva ayo anofambisa kufamba mune yepiritsi nzira:
Kuti tidzokere kuchiratidziro chemumba, ikozvino isu tinongofanirwa kutsvaira kumusoro kubva pasi pechidzitiro.
Kuti tione mashandiro akavhurwa, tichaita zvakafanana, asi isu tichachengeta chigunwe chakamiswa pakati pechidzitiro, icho chinozovhura iyo sarudza yekushandisa kana iyo multitasking maonero (uye ndine urombo, asi pano ndinofanira kutaura izvozvo , zvakanaka, izvi zvatave kutoona).
Iye zvino tava kufambira mberi kana kudzokera kune peji rekare rewebhu nekutsvaira kuruboshwe kana kurudyi kubva kumucheto kwechidzitiro.
Iyo Chromebook shefu yakagadzirwazve kuratidza yakawanda nzvimbo pachiratidziro windows uye maapp. Iye zvino, mumutambo wepiritsi tinokwanisa kuwana izvo zvakagadziriswa zvinoshandiswa uye zvimwe zvirongwa zviri kumhanya paKasirafu Shefu.
Shefu rave kuumbika kupa nzvimbo yakawanda yekutarisa pane mabasa aripo.
Iyo Mufananidzo-mu-Mufananidzo ikozvino yasvika kune ese maapplication muchitoro cheGoogle Play.
Iye zvino zvave nyore kubata Chrome tabo nekuda kwetambo inosvikika nekutepa kana tiri mu tablet mode.
Google inovimbisa kuti vachiri kushanda pane dzimwe nhau dzinozovandudza tablet, asi izvo zvichave zviri mu Chrome OS 82, iyo yaifanira kunge yakasvika muna Chivabvu 5, asi ichanonoka, kana kusiiwa uye kupfuudzwa. akananga ku v83, nekuda kwedambudziko re COVID-19.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome OS 81 yakauya pamwe nekuvandudzwa kwetafura modhi uye idzi dzimwe nhau
Iyo PineTab inogona kuchengetwa gare gare mwedzi uno kwemadhora zana
Switf Iye zvino nerutsigiro rwezvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux, kusanganisira Ubuntu 20.04